4 कारण हामी साल्सा लाई माया गर्छौं फ्रेड Astaire
4 कारण हामी साल्सा लाई माया गर्छौं
यो गर्मी हो, र गर्मी गर्मी ल्याउँछ। एउटै हाम्रो मनपर्ने नृत्य को लागी जान्छ - साल्सा। यो तातो, तातो, तातो छ। साल्सा लोकप्रियता मा बढ्न को लागी जारी छ किनकि यसको छिटो गति र जीवन्त संगीत को कारण यो क्यारिबियन आधारित नृत्य संगै छ।
ल्याटिन नृत्य एक crescendo निर्माण, तनाव र रिलीज सिर्जना। त्यो साल्सा एक अद्भुत साथी नृत्य, एक धेरै सामाजिक एक र एक हो कि हामी फ्रेड Astaire नृत्य स्टुडियो मा सिकाउन मनपर्छ बनाउँछ। हामी साल्सा विद्यार्थीहरुलाई शुरुवात बाट विशेषज्ञ पढाउँछौं, निजी निर्देश र समूह कक्षाहरु संग सधैं चलिरहेको छ र अभ्यास पार्टीहरु नियमित रूप मा अनुसूचित।
हामी सिफारिश गर्छौं साल्सा धेरै कारणहरु को लागी अत्यधिक:
साल्सा रमाईलो छ! यो जीवन्त नृत्य, अफ्रो-क्युबा जराहरु संग, भावुक छ र नर्तकहरु सँगै सँगै ल्याउँछ। त्यहाँ सेक्सी र जटिल footwork र दिनचर्याहरु कि लगभग ज्वरो शिखर सम्म पुग्न सक्छ निष्पादन मा एक साझा खुशी छ। यो तपाइँको सामाजिक जीवन मा सुधार गर्न सक्छ किनकि नर्तकहरु एक साथी को आवश्यकता छ र एक नर्तकी सिका र नृत्य साल्सा मा धेरै साझेदार हुन सक्छ। अधिक नयाँ र रमाईलो मान्छे लाई भेट्न चाहानुहुन्छ? साल्सा एक तरीका हो।
साल्सा तपाइँ आकार मा प्राप्त गर्न र तपाइँ आकार मा राख्न मद्दत गर्दछ। साल्सा नृत्य को एक घण्टा कहीं 400-500 क्यालोरी बाट जलाउँछ। के तपाइँ बरु जिम मा एक ट्रेडमिल मा हुनु भन्दा नृत्य गर्नुहुन्न? हामीले यस्तै सोचेका थियौं। यो जस्तै व्यायाम संग वजन घटाने र राम्रो कार्डियो कंडीशनिंग आउँछ। नृत्य पनि एक महान रचनात्मक आउटलेट र एक मानसिक उत्तेजक हो।
साल्सा एक नृत्य भन्दा बढी उठाउन समावेश छ। यसको जरा को कारण, साल्सा ल्याटिन अमेरिकी संस्कृति र संगीत को लागी नर्तकहरु लाई उजागर गर्दछ। यो पनि एक नृत्य हो कि राम्रो संग अन्तर्राष्ट्रिय मा परिचित छ र कहीं पनि गर्न सकिन्छ। यो शैली अनुसार विभिन्न स्थानहरुमा फरक हुन सक्छ - न्यूयोर्क को साल्सा दृश्य ऐतिहासिक रूप मा एक प्यूर्टो रिकन प्रभाव को अधिक भएको छ, जबकि फ्लोरिडा को क्यूबा मा धेरै लंगरिएको छ - तर एक साल्सा aficionado कहीं नृत्य गर्न सक्छन्।
साल्सा अन्य नृत्य को लागी ढोका खोल्छ। जो धेरै साल्सा जान्छन् पहिले नै mambo थाहा छ र ल्याटिन नृत्य को लागी एक स्वाद छ। तर जो आफ्नो नियमित बॉलरूम नृत्य दिनचर्या को लागी एक अतिरिक्त को रूप मा साल्सा उठाउन को लागी अर्को बाटो खोज्न सक्छ-bachata, merengue, tango, cha-cha-कि समान रूप बाट आकर्षक र रमाईलो छ। साल्सा तपाइँको रमाईलो नृत्य को लागी प्रवेश द्वार हुन सक्छ।
फ्रेड Astaire नृत्य स्टुडियो निजी साल्सा कक्षाहरु वा समूह साल्सा कक्षाहरु वा ballroom नृत्य को कुनै पनि रूप मा जानकारी को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी संग नृत्य, हामी जान्दछौं कि तपाइँ खुशी हुनुहुनेछ कि तपाइँ गर्नुभयो।